Myat Shu - 2012 May
You are here : Myat Shu » Archives for May 2012
Published By Myat Shu On Thursday, May 24th 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
အချီး ။ ။ ဤ သစ္စာဆုံသောဒီရေတိုးသံဖြင့် သမိုင်းဆွေး မုသားဆွေး အလင်းလှောင်ချိုင့်ပွင့်ပြီး ငါတို့၏ အဝေးရောက်လပြည့်ညများ ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြစေအံ့။ ပုဂ္ဂလိကဓမ္မ ။ ။ သင်မှ ငါ့ထံသို့ ဂငယ်ကွေ့ ကွေ့ပြန်လာသော ဥပေက္ခာတည်ရာ၌ ငါ၏ ငါမှဖြစ်သောဝိရောဓိတို့ အခါခါချုပ်ငြိမ်းလေ၏။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ။ ။ သားတယောက်ဖြစ် ချစ်၍ တစ္ဆေ ရင်ဝယ်နှစ်ကာ ငါ၏ကဗျာ ငါ၏စာ။ ဆုတောင်း ။ ။ မိုးရွာပြီးစကောင်းကင်ထက် မုန်တိုင်းကြွင်းမုန်တိုင်းကျန်စီးနင်း ခွပ်ဒေါင်းမင်းဘယ်ညာခြေကုတ်မြဲမြဲ ထောက်ကနဲဖြတ်ခဲ့သောကြိုး လူ့ငဖျံလူ့ဘီလူးအတ္တ နောက်ဆုံး အဓမ္မဖြစ်ပါစေ။ စိမ်းလဲဆယ်ယူ စိုလဲဆယ်ယူ ထီးတည်းလဲဆယ်ယူ ပြိုင်တူလဲဆယ်ယူ ယမ်းငွေ့တလူလူ အလံဖြူကျို့တို့ကျဲတဲ ငါတို့ဘိုးဘွားပိုင်မြေပြင်လဲ ဘုရားသခင်အလိုတော်အရ ခြေခင်းလက်ခင်းသာပါစေ။ အဖြည် ။ ။ အလို.. လူကြီးလူကောင်း အချောင်းအမြောင်းမျိုးနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကံကြမ္မာ ခင်ဗျားကြီး အရင်လို ခွေးပြုံး ၀က်ပြုံး ပြုံးနေတုန်းပါလား။ ညိုခက်ကျော် ၂၀၊မေ၊၂၀၁၂ (မနက် ၄နာရီ၄၅မိနစ်) ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, May 23rd 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်၊ သုံးရက်၊ လေးရက်၊ ငါးရက်၊ ခြောက်ရက်၊ ခုနစ်ရက်၊ ရှစ်ရက်၊ ကိုးရက်၊ ဆယ်ရက်၊ ဆယ့်တစ်ရက်၊ ဆယ့်နှစ်ရက်၊ ဆယ့်သုံးရက်၊ ဆယ့်လေးရက် …. ဆယ့်ငါးရက် …… ဆယ့်ခြောက်ရက် ... ဆယ့်ခြောက်ရက် ... ဆယ့်ခြောက်ရက်။ “ဆယ့်ခြောက်ရက်ဆိုတော့ နှစ်ပတ်ကျော်ပြီးလို့ လ၀က်တောင် ကျိုးပြီပေါ့” ဟု မကျင်လှ လွှတ်ခနဲ ရေရွတ်မိသည်။ ဤရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ကျော် အချိန်ကာလသည် သူ့ ဘ၀တွင် အရှည်လျားဆုံးဖြစ်သည်ဟု မကျင်လှ ထင်မိသည်။ စင်စစ် မကျင်လှ ဖြတ်သန်းလာရာ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတွင် နေ့ရက်အချိန်ကာလတို့ကို အဆန်းတကြယ်လုပ်၍ ရေတွက်ခြင်း တစ်ခါမျှ မရှိဖူးခဲ့ပေ။ ထိုသို့ ရေတွက်ရန် သူ့တွင် အချိန်အခါ၊ ... Continue Reading
ချမ်းသာခြင်းအား မျှဝေပေးပါ (၁)
Published By Myat Shu On Tuesday, May 15th 2012. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
ဆည်းဆာအလှ ခြယ်မှုန်းသူများ လေလွင့်ကလေးငယ်တွေ၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေ၊ စွန့်ပစ်ခံကလေးတွေ၊ သူတို့ ၀မ်းစာအတွက် အရွယ်နဲ့မမျှအောင် ရုန်းကန်နေရတဲ့ ကလေးတွေကို မြင်တိုင်း ကျွန်မ ငယ်ငယ်တုန်းက တွေးခဲ့ဖူးတာလေးကို သတိရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ့်ချွေးနည်းစာနဲ့သာ လူမှုဂေဟာတခုခုမှာ ရွေးချယ်ပြီး လှူဒါန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာထက် မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် လူငယ်ပြုပြင်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွေမှာပဲ လှူမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးပါပဲ။ ကျွန်မရဲ့အမြင်က ကလေးငယ်လေးတွေဟာ ဘ၀လမ်းခရီးကို အကြာကြီး လျှောက်ရဦးမယ်။ သူတို့မှာ ကာယခွန်အား၊ ဥာဏခွန်အား ပြည့်ဝဖို့လိုတယ်။ နှိမ်ချခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ၊ သိမ်ငယ်မှုတွေ၊ ခါးသီးနာကျည်းစရာတွေ၊ အတက်အကျ လောကဓံတရားတွေကို နုနယ်တဲ့ သူတို့ နှလုံးသားမှာ မထင်ဟပ်စေလိုဘူး။ သူတို့ကို တတ်နိုင်သလောက် ပံ့ပိုးပေးပြီး သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းကို တည့်မတ်ပေးတာဟာ အနာဂတ်အတွက် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, May 6th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
စာရေးဆရာကြီး ကျော်အောင်စံထားသည် ကလောင်ကို သွေး၍ နေလေသည်။ သူသည် နှစ်ကျပ်တန် လုံးချင်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ထိပ်သီး စာပေဖြန့်ချိရေး ပုံနှိပ်ဌာနမှ တစ်ဆင့် ရေးသား ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ ရောင်းချပြီး ဖြစ်သည်။ စာအုပ်တွင် ပထမနှိပ်ခြင်း ၂၀၀၀ ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။ ထို ၂၀၀၀ မှာ ပုံနှိပ်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ထွက်သွားသည်။ ထွက်သွားသည် ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်ဖြူ နှစ်ထောင် ထွက်သွားသည့် ပုံပမာနှင့် ခပ်ဆင်ဆင် တူပေသည်။ နှစ်ထောင် ထွက်သော်လည်း တစ်သောင်း ကျန်ရစ် သကဲ့သို့ ထိပ်သီးစာပေ ဖြန့်ချိရေး ပုံနှိပ်ဌာမှ ထွက်သွားပြီးနောက် ကြိုက်တာရွေးယူ ငါးမူး စာအုပ်ဆိုင်များတွင် ထောင်သောင်း များစွာသော စာတိုစာစတို့၏ ... Continue Reading
ကင်းဘတ်စပေါ် ဆက်တိုက်ကျနေတဲ့ သူ့လက်တွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်း စုတ်ချက်တွေကို ဖန်တီးနေမှန်း ကိုကျော်ဝေ သိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မတားချင်ဘူး။ ပြေးစမ်း ၊ ဆွဲစမ်း ဆိုပြီးကို လွှတ်ထားလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲက မကျေနပ်ချက်တွေကို လက်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီး စုတ်တံကို အသက်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ သူတစ်ခါမှ မရဘူးတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ် ရုပ်လုံးပေါ်လာတော့တယ်။ သူ့အရှေ့မှာ တငြိမ့်ငြိမ့်စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်ရေပြင်က သူဒေါသတရားအောက်မှာ လှိုင်းထန်နေတဲ့ မြစ်ရိုင်းတစ်စင်းဖြစ်သွားတယ်။ သာယာကြည်လင်နေတဲ့ နေရောင်က ကားချပ်ထဲမှာ ည အမှောင်ဖြစ်သွားတော့တယ်။ အမှောင်ထုအောက်က လှိုင်းထန်နေတဲ့ မြစ်ပြင်။ ဒါက လက်ရှိသူ့စိတ်အခြေအနေကို ပြနေတဲ့ ပြယုဂ် ပန်းချီကားပဲ။ ကိုကျော်ဝေက ဒီမြစ်ဘေးမှာ ခဏခဏ ပန်းချီလာဆွဲတယ်။ ဆွဲခဲ့သမျှလည်း သာသာယာယာ ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်ကွင်းတွေချည်းပဲ။ မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, May 5th 2012. Under မျက်ရှု, သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
ခုတလော နာမည်ကြီးနေတဲ့ The Lady ကို အခါအခွင့်သင့်လို့ ကြည့်ရတော့ မြန်မာပြည်အကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာပြည်မှာ ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းကို ရှာဖွေကြည့်မိပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်တချို့ကိုတော့ http://www.britishpathe.com/ နဲ့ ယူကျုပေါ်ကနေတဆင့်လည်း ရှာဖွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။ British Pathe မှာတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မှတ်တမ်းကားတွေကို ပိုပြီး ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားက ထုတ်ဝေသူတွေ၊ ရိုက်ကူးသူတွေရိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ မြန်မာပရိတ်သတ် သိတဲ့ ဇာတ်ကားတွေက The Lady (2011) ပြီးရင် Beyond Rangoon (1995) နဲ့ The Purple Plain (1954) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းရောင်လွင်ပြင် (The ... Continue Reading